TOMATO "PUDOVIK": SHARAXAADDA KALA DUWAN IYO SAWIRRADA, SIFOOYINKA IYO DHALIDDA, GAAR AHAAN BEERASHADA - BEER CAGAARAN
Calaamadaha, faa'iidooyinka, sifooyinka beerista ee yaanyo ee darajada "Pudovik"
Breeders agrofirm Siberian Garden waxay bixiyaan wax yaryar oo yaanyo badan leh. Waxaa laga yaabaa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee bannaanka u yahay yaanyada Pudovik. Miraha waxaa lagu qiimeeyay ma aha oo kaliya ee size ee yaanyada bislaado, laakiin sidoo kale dhalidda iyo dhadhan fiican.
In this article waxaad ka heli doontaa sharaxaad buuxda oo faahfaahsan oo kala duwan. Waxa kale oo ay awood u yeelan karaan in ay bartaan sifooyinka asaasiga ah iyo sifooyinka beerashada.
Yaanyada Pudovik: sharaxaad kala duwan
Magaca dugsiga Pudovik
Sharaxaad guud Waxyaabaha kala duwan ee udub dhexaad u ah
Bisaylka 112-115 maalmood
Foomka Wadnaha oo qaabeeya wadnaha
Cunto dhexdhexaad ah 700-800 garaam
Codsiga Qolka cuntada
Noocyo dhaadheer ilaa 20 kg halkii mitir labajibbaaran
Cadaadiska cudurada Iska daaweyn cudurada badankood
Dalka dalagyada Ruushka. Kala duwan ayaa lagu talinayaa in ay koraan, labadaba safafka furan, iyo in lagu koriyo iyo hoyga filimada.
Beeraha noocyada dhirta dhirta ku dhisan. On dhulka u furan koraan si height ah 100-120, koraan ee lagu koriyo kor ku xusan, ilaa 170-180 sentimitir.
Buundooyinku waa ay ku faafaan, mitir labajibbaaran, laguma talinayo inay beeraan wax ka badan 4-5 duurka. Tirada caleemaha dabacsan waxay ka sarraysaa celcelis ahaan, cagaar madow oo midab leh, caan ku ah yaanyo.
Bush wuxuu u baahan yahay in laga saaro tallaabooyinka iyo xirashada taageerada.
Cultivar Pudovik leh Bisayl dhexdhexaad ah. Laga soo bilaabo beeritaanka abuurka si loo soo saaro yaanyada tufaaxa, goosashada ugu horreysa waxay qaadataa 112-115 maalmood. Marar badan. Waxtarka ugu fiican ee baadiyaha waxay muujinaysaa marka la samaysanayo 2-3 afkoda iyo soo degitaanka dhulka furan. Marka koray ubaxyada, dhalidda waa wax yar.
Iskudhin celcelis ahaan 4.8-5.0 kiilo oo duurka ah, 18.5-20.0 kiilo markuu abuurayo wax ka badan 4 dhirta halkii mitir labajibbaaran.
Pudovik ilaa 20 kg halkii mitir labajibbaaran
Wadnaha Honey 8.5 kg halkii mitir labajibbaaran
Sida laga soo xigtay faallooyinka laga helay bannaanka u, kala duwan tani waxay ku dhowaad ma aha mid u nugul cudurada ugu weyn ee yaanyada. Iyadoo bacarimiso dhexdhexaad ah Bacriminta macdanta, difaaca dhirta oo kordhay oo kaliya. Iyada oo waraabin badan iyo xaaladaha dabiiciga ah (roobab daba dheeraaday), yaanyada waxay u nugul yihiin dillaac.
Akhri boggayaga oo dhan oo ku saabsan cudurrada yaanyada ee lagu koriyo iyo sida loola dagaallamo cuduradan.
Waxaan sidoo kale bixinnaa waxyaabaha ku saabsan noocyo badan oo dhalaya iyo cudurada u adkaysta.
Dhadhan fiican yaanyo.
Miro weyn oo weyn.
Badbaadinta wanaagsan inta lagu jiro gaadiidka.
Baahida loo qabo xirashada iyo baadiyaha pasynkovaniya.
Tartan si aad u fara badan oo qoyaan leh.
Yaanyo yaryar oo qallalan - wadnaha-qaabeeya. Iftiin aan dhalaalayn - cagaar, dillaaciyay, casaan leh shimbir raspberry ah, oo si fiican loo iftiimiyay madow - meel cagaaran ah oo ku yaala asliga ah. Celcelis ahaan miisaanka 700-800 garaam, oo leh daryeel wanaagsan iyo qiyaasta tirada miraha ilaa 1.0-1,2 kiilo garaam. Codsashada cunto cusub, salad, diyaarinta jiilaalka qaabka suugada, lecho. Soo bandhigid wanaagsan, ilaalinta fiican ee miro inta lagu jiro gaadiidka iyo tabsiyada daaqada.
Waxaad isbarbar dhigi kartaa tusaalahan kala duwan noocyada kale ee jadwalka hoose:
Magaca dugsiga Miisaanka miro
Cabbirka Ruushka 650-2000
Mucjiso Podsinskoe 150-300
Ribbedka Maraykanka 300-600
Ra'iisul wasaaraha 120-180
Wadnaha Honey 120-140
Waxaad arki kartaa midhaha yaanyada "Pudovik" ee sawirka:
Abuuritaanka abuurka geedo sii kordhaya ayaa lagula talinayaa dhamaadka bisha Maarso. Iyada oo muuqaalka muuqaalka ah ee 3-4 caleemo qarashgareeyo bacarimiso, isku darsamida qaadashada geedo. Ka dib markii kululaynta ciidda, geedo waxaa lagu beeray diyaarinta, ciidda bacrimiyey. Tamaandhada waxay doorbidi karaan carrada dhexdhexaad ah ama waxoogaa yar acidic leh dheecaan wanaagsan..
In geedi socodka koritaanka, duurka waxay u baahan tahay bacarin dhexdhexaad ah bacriminta adag. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la xiro dhirta si taageerada tooska ah loo rakibay.
Bannaanka ayaa lagula talinayaa in laga saaro 3-4 caleemo hoose oo baadiyaha ah si ay hawo u soo qaadaan dhulka. Waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda godadka, waraabinta dhexdhexaad ah biyo diiran, jaridda dhirta.
Haddii aad raacdo sharciyadan fudud ee daryeelka, yaanyo Pudovik waxay ku siin doontaa yaanyo badan oo dhadhan fiican leh. Waxaannu kuu rajaynaynaa in aad aad u fiican, bacaha qaaliga ah!
Jaantuska hoose waxaad ka heli doontaa links ku saabsan maqaallada ku saabsan yaanyada leh shuruudaha kala duwan:
Xilliga bartamaha Dhaqdhaqaaqa-dillaac Aad u fiican
Dobrynya Nikitich Ra'iisul wasaaraha Alpha
Dambiga qorraxda ee F1 De Barao Giant Daadka dahabka ah
F1 qorraxda Yusupovskiy Cibaadadu waa caajis
Mikado Wadnaha Mucjisada qorfe
Azure F1 Giant Gantaal Sanka
Uncle Styopa Altai Locomotive
The jecel yihiin ee bannaanka u badan, Rifle leh dhadhanka dhab ah daahir - kala duwan "Xenia"
Korniinka guriga ku kora
Kala duwanaanta canabka "Arcadia"
Daroogada Veterinary "Flexoprofen": tilmaamaha, qiyaasta
Shirkadda ugu weyn ee beeraha ee Ukraine si guul leh bilaabay beereed
Dill barxad ah ayaa loo yaqaan dhammaan sida wax lagu kariyo basbaaska leh oo loo isticmaalo suxuuno kala duwan. Dad badan ayaa isticmaala warshadahan xagaaga, waxay kaloo u diyaariyaan jiilaalka loogu talagalay isticmaalka aadanaha - way engegaan, barafoobaan ama ku shub milix. Intaa waxaa dheer, dill waxaa badanaa loo isticmaalaa ujeedooyinka daawooyinka, tusaale ahaan, si caadi ah cadaadiska. Read More
Isqorista isqortida xagaaga naftaada
Talooyin faahfaahsan oo loogu talagalay bilowga ah si ay u daaqaan digaagga guriga